Xiaomi Mijia M365 electric skuuta nyochaa: atụmatụ, onyinye | Akụkọ akụrụngwa
Nacho Cuesta | | Ngwa, Nyocha
Anyị nwalere skuuta Xiaomi Mijia M365, ngwaahịa nke chọtara ụzọ ya na isi obodo Spanish na nke ahụ, nke nta nke nta, na-abanye n'akụkụ ndị ọzọ nke mpaghara Iberia dị ka ezigbo ihe ọzọ maka njem ụgbọ njem ọha na nke onwe.
Ndị na-agagharị agagharị ga-abụ ọdịnihu nke agagharị? N'ezie, ee, ha adịla ugbu a, ọ bụ ya mere anyị ga-eji gwa gị igodo nke ụdị onye ọrịa eletrik Xiaomi a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
1 Xiaomi M365 bụ skuuta eletriki kachasị mma?
2 Mmetụta mbụ
3.1 Enwere ike iji ya na mmiri ozuzo?
3.2 Rịgo ugwu?
3.3 Olee ebe m ga-eso ya gaa?
3.4 Ha dịkwa mma?
3.5 Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji chaji batrị ahụ?
3.6 Thegbọ ụkwụ ndị ahụ ọkpọ?
3.7 Kedu oke ibu ọ nwere ike iburu?
4 Akụkụ iji melite
Xiaomi M365 bụ skuuta eletriki kachasị mma?
Ikekwe ee. Ọ bụghị ya kachasị ọsọ ma ọ bụ dị ọnụ ala, mana ọ kachasị bụrụ nke ziri ezi na nke mere ya otu n'ime smartest nhọrọ mgbe mmadu na acho izuta igwe oku eletrik.
Ma gịnị mere o ji bụrụ nke kachasị baa uru? O doro anya na Xiaomi na-arụ ọrụ dị mma n'ahịa n'ihi ọnụnọ ya n'ahịa nke ekwentị mkpanaaka, batrị, ọkụ ọkụ, akpịrịkpa, ... ha nwere ahụmịhe na usoro ndekọ siri ike zuru ezu iji bido eletrik mbụ ha. skuuta, nke na-enweghị chọrọ (ma ọ bụ chọrọ), nwee ịhụnanya na onye ọ bụla nke na-anwale ya maka oge mbụ. Maka gịnị bụ ihe a?
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị onye scooter eletrik, mmetụta mbụ ị nwere bụ na ị ga-egbu onwe gị ma ị ga-akpachara anya. Amaghị ihe anyị na-eme na nke mbụ anyị jikọtara nke nta nke nta ịmalite ịgbanwe mmetụta nke enweghị nchebe maka nke ọchị.
N’ime nkeji ole na ole, ma ome osooso ma breeki enweela mmetụta. Usoro mmụta dị obere ya mere nwata na okenye nwere ike iji ya mee ihe n’enweghi nsogbu ọ bụla ozugbo ọkwa a dị mkpirikpi gafere. Ọbụna anyị nwere ọnọdụ ECO na mgbakwunye na ịgbatị nnwere onwe, na-egbochi ọsọ ọsọ ọsọ ruo 18km / h ma gbanwee nzacha ntụgharị iji mee ka ọ dị nro.
Throttle bụ analọg dị ka nke a ụgbọ ala, ya bụ, na-adabere na ụzọ anyị na-eme nke cam, na skuuta ga-eru ọzọ ọsọ ma ọ bụ obere ma ọ bụrụ na anyị dị nnọọ akpali ya a ole na ole millimeters. M ijuanya kwụsie ike nke a skuta na ọ bụ na anyị nwere ike na-otu ụdaolu dị ka onye na-eje ije na-enweghị nsogbu.
N'ezie, ozugbo anyị were trotul n'ụzọ zuru ezu, moto na-enweghị brush nke dị na wiil ụkwụ mbụ kpughee ike ya niile ozugbo, nke sụgharịrị gaa na 500W nke ike na ọnụọgụ nke 16nm. Ike ngwangwa anyị nwere site na nkwụsị na traction nke obere wiil ya na-ebugharị na mpaghara niile, ọbụlagodi mgbe mmiri dị, bụ ihe ịtụnanya.
Rigo ugwu n’enweghi nsogbu ma ọ na-egosi na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ya ike ịnọgide. N'elu ugwu kachasị sie ike (mgbago nke ebe a na-adọba ụgbọala, dịka ọmụmaatụ), ọ ga-adị mma ka anyị jiri otu ọsọ gafere ka ọtụtụ n'ime ịrịgo anyị na-eji inertia nke ya wee rụọ ọrụ nke ọma ruo mgbe anyị meriri ya. Ọ bụrụ na anyị emeghị otu a, ọ ga-abụ na anyị ga-azọ ụkwụ n'etiti mkpọda. Agbanyeghị, ọtụtụ mkpọda anyị hụrụ na mpaghara Spanish nwere ike ijikwa ha na enweghị nsogbu.
The braking usoro bụ okpukpu abụọ. N'otu aka, anyị nwere breeki igwe eji arụ ọrụ na-etinye n'azụ ụkwụ ma na-enye ike zuru ezu iji kwụsị skuuta skuuta ahụ ma ọfụma nke Xiaomi Mi Scooter. nwere regenerative braking Ya mere, mgbe braking, anyị ịgbanwe na kinetic ike anyị na-ebu n'ime eletriki ike ga-eji gbatịa obodo kwụụrụ nke electric skuuta a obere ihe.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na breeki ụkwụ ihu nwere ụdị ABS usoro na-egbochi mkpọchi ụkwụ na braking siri ike, ihe dị mkpa iji zere ịdaba n'ala ma melite nchekwa anyị.
Ngwunye bred hydraulic ọ ga-adị mma? Obi abụọ adịghị ya, mmetụta braking ga-akachasị elu ma jiri naanị otu mkpịsị aka mana akụkụ ala nke ahụ bụ na sistemu ahụ ga-adị oke ọnụ ma sie ike idozi karịa iji breeki igwe na-arụ ọrụ, ma lever na USB nke na-adọta ihe breeki caliper sitere na igwe ya mere, anyị ga-enwe ngwa ngwa ozugbo na obere ego.
Na ọkwa nkasi obi, anyị na-ahụ Xiaomi skuuta siri ike, maka ihe ọma na ihe ọjọọ. A na-ebuga ngọngọ ọ bụla ma ọ bụ enweghị ntụpọ na mbara ala ahụ na aka anyị nwere ike mebie na-agba ịnyịnya ogologo ma ọ bụrụ na ụzọ okporo ụzọ adịghị mma. Enweghị nkwụsịtụ, yabụ ndụmọdụ m bụ na ị ga-eji obere nrụgide na-agba ịnyịnya na wiil ahụ ka taya ahụ n'onwe ya gbanwee na ala ma ghara ịlaghachi ma na-agafeghị anyị ebe ọ bụ na ịme nke a na-eme ka ohere nke mgbapu (ha bụ wiil na a tube) ma ọ bụ ọbụna slide gburugburu a usoro ma ọ bụrụ na anyị na-aga na elu na-agba.
Ndụmọdụ ọzọ iji meziwanye nkasi obi nke skuuta bụ dochie ndị na-ejide roba gị na ndị ụfụfụ akwa njupụta. Ndị nke ịnyịnya ígwè bara uru ma enwere ọtụtụ ụdị ịhọrọ site na (akara Ritchey nwere ole na ole ma ha anaghị agafe € 10). Site na ngbanwe nke njigide na nrụgide dị ala na wiilị, anyị ga-eme ka nkasi obi dịkwuo mma ma belata mkpọtụ.
Ihe ahụ masịrị m anyị enwuola ọkụ, ma n’ihu ma n’azụ. Azụ ọkụ na-arụ ọrụ dị ka ọnọdụ ọnọdụ kamakwa dị ka ọkụ braking mgbe ejiri mpempe akwụkwọ kwekọrọ, yabụ ọ bụrụ na anyị gaa n'okporo ụzọ, ụgbọ ala na ọgba tum tum ga-amata na anyị na-ebelata ọsọ ka ha onwe ha kwa wee nwee ike ịme ya n'enweghị nsogbu ma tụọ anya.
Ihu ọkụ na-agbasasị ìhè nke ọma ma nwee naanị ikike ziri ezi iji mee ka anyị nwee ihe dị ka mita ise ma ọ bụ isii n'ihu anyị. Ọ naghị arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ọtụtụ n'abalị, ị nwere ike ịchọrọ iji ihu maka okpu agha. Maka njem dị mkpirikpi nke anyị maara, ọ karịrị ezughị.
Anyị rutere ebe anyị na-aga, anyị n'ogige atụrụ na skuuta ihe nke 15 sekọnd ọ kachasị. Naanị anyị ga-ahapụ ntọhapụ ngwa ngwa nke dị na kọlụm na-ahụ maka ụgbọ elu, gbanye ya ma dakọtara taabụ nke nwere mgbịrịgba ahụ na wiil azụ ka setịpụrụ ya apịaji. Site na oge ahụ anyị nwere ike iburu ya (ọ dị 12,5Kg) ma ọ bụ dọrọ ya nke ọma ma chekwaa ya ebe ọ bụla, ọ dabara adaba na ogwe ụgbọ ala dị ugbu a.
Na obodo ndị dị ka Madrid, nke a bara ezigbo uru ebe ọ bụ na ndị bi n'obodo ndị dị na mpụga isi obodo na-eme akụkụ nke njem ha na-arụ ọrụ site na ụgbọ ala, ịpasa na mpaghara dị mfe ịnweta wee mee kilomita ndị ikpeazụ site na obodo na Xiaomi skuta. , si otú a na-ezere njem ọsọ ọsọ na ọgba aghara nke Central Madrid.
Dika anyi maara na otutu n’ime gi anaghi emecha ihe ngba na eletrik na ndi scooters n’ihi obi abua o n’emeputa, mgbe ahu anyi gha achikota ajuju ajuju ị n’acha:
Enwere ike iji ya na mmiri ozuzo?
Anyị nwere ike iji skuta nsogbu adighi na mmiri mmiri ma obu oke mmiri ozuzo. Njide ahụ dị mma na nchedo IP54 na-achọpụta na uzuzu, unyi ma ọ bụ mmiri agaghị abanye na njikọta na sistemụ eletriki. Anyị nwekwara fendụ, ndị dị n’ihu ma n’azụ, iji gbochie apịtị ma ọ bụ mmiri ịcha uwe anyị.
Dịka anyị kwurula, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ha ga-ebugo ha n'enweghị nsogbu ọ bụ ezie na ị kwesịrị ịmara na nnyefe ike ọzọ nke injin ahụ na-eme iji merie enweghị nsogbu ga-eme ka mbelata nnwere onwe.
Olee ebe m ga-eso ya gaa?
Agbanyeghị na Xiaomi kwupụtara ọkwa dị kilomita iri atọ, na nyocha anyị, anyị agaala ụzọ dị n'etiti 20km na 25km.
Inweta ikike ma ọ bụ obere kilomita nke nnwere onwe dabere na ụdị ịnya ụgbọ ala anyị na-eme, ihe anyị na-atụ, ọnọdụ ala, oge ole anyị na-eji braking na-emegharị, wdg. Na njedebe, enwere ike ịkọwapụta ụdị ihe na - emetụta ma ụgbọ ala na - ere mmanụ ụgbọala ma ọ bụ obere karịa.
Ha dịkwa mma?
Dị nnọọ mma ma ha na-achọ oge mmegharị iji jiri nkuku aka ha dị warara, na-enwe mmetụta nke breeki na ome osooso, wdg.
N'ime oge nke oge, ị gaferefe oge nnabata ahụ ma ị ga-ahụ otu obere, skuuta ga-abụ ndọtị gị.
Cheta ikpu okpu agha na njem gị. Ihe ọghọm na-eme ma ọ bụrụ na anyị atụghị anya ya na ọ bụ ezie na skuta eletrik na-adịghị ize ndụ, anyị amaghị mgbe anyị ga-ada. Zere ụjọ.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji chaji batrị ahụ?
Oge nkwụ ụgwọ zuru ezu gburugburu 5 awa ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na-ana ya n'abalị ma si otú a kwadebe ya n'echi ya.
Thegbọ ụkwụ ndị ahụ ọkpọ?
Ndị na-abịa ụkpụrụ ee ebe ọ bụ na ha na-eji ụlọ ikuku. Taya ahụ pere oke ma ọ gwụla ma ị tụgharịrị n’ọhịa ma ọ bụ jide iko, ọ ga-esiri gị ike ịda ụda.
Agbanyeghị, ịnwere ike dochie taya 8 inch nke anụ ọhịa maka ọkpọ ụkwụ siri ike dịka nke achọtara na oche oche ụfọdụ. Site n'ime nke a, ị ga-echefu banyere mgbapu, ọ bụ ezie na ị ga-achụ nkasi obi n'àjà n'ihi na a na-ebufe enweghị nsogbu ọ bụla na mbara ala ahụ na njikwa ahụ.
Kedu oke ibu ọ nwere ike iburu?
100Kg. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ịfefe ọnụ ọgụgụ a ebe ọ bụ na batrị dị n'okpuru mpaghara nkwado ahụ, yabụ ọ bụrụ na ọdịda adịghị arụ ọrụ karịa karịa oke ibu enyere, anyị nwere ike ịnwe nnukwu ihe ọghọm ma ọ bụrụ na batrị emetụta ma bụrụ nke anaghị akwụsi ike.
Na Madrid ị ga-ahụ ndị nne na nna na-aga ele ụmụ ha anya na skuta eletriki, ha zụtaara ha nkwado ka ha wee dịkwuo elu wee si otú a rute aka ahụ n'ụzọ dị mfe. Agbanyeghi na akwadoghi ime nke a (emebere onye ọrịa ahụ maka njem nke ndị mmadụ, nchekwa nke nwa gị na nke gị nọ n'ihe ize ndụ), ọ bụrụhaala na 100Kg agabigaghị ọnụ, nsogbu agaghị adị.
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ndị ọzọ metụtara onye ọrịa ahụ, hapụ anyị okwu, anyị ga-aza ajụjụ a.
Akụkụ iji melite
Anyị ahụworị omume ọma niile nke Mi Electric Scooter mana enwere ihe ndị nwere ike ịkwalite maka ụdị nsụgharị ngwaahịa a n'ọdịnihu.
Nke mbu bu webata ihe ngosi na ogwe aka nke ahụ na-enyere anyị aka ịhụ n’oge nke akụkụ skuuta dị ka ọsọ anyị na-aga, kilomita anyị gara njem n’ogologo ma ọ bụ na njem ahụ, oge anyị ji ya, wdg. Enwere ike ime ya site na ngwa mkpanaka mana ọ baghị uru ịbanye na ama iji hụ data dị mkpa.
na creaks ke mpịachi ebe o bukwa ihe inyocha. Ọtụtụ ndị ọrụ ahọrọla itinye roba ma ọ bụ mpempe akwụkwọ 3D edere na mpaghara ahụ, na-edozi nsogbu ahụ n'ụzọ dị ukwuu. Ọ bụ ezie na njakịrị a na-abụkarị ihe a na-ahụkarị (ọtụtụ igwe kwụ otu ebe bụ ebe obibi cricket karịa oge) ma ghara itinye nchekwa anyị n'ihe egwu, ọ na-ewe iwe.
para mfe iga mgbe apịaji, Ọ ga-adị mma ịtinye wiil ụfọdụ dị ka nke skate inline ma ọ bụ akpa akwa.
N'ikpeazụ, trotul ga-agbanwe ya ka ọ bụrụ ọkpọ dị ka nke ọgba tum tum. Ihe kpatara ya dị mfe ma ọ bụ na aka ahụ bụ naanị ihe anyị jidere ka anyị na skate na-agagharị, ya mere, ọ ka dị mma karịa na mkpịsị aka anyị niile na-ejide aka ahụ n'ike kama ịnwe mkpịsị ụkwụ ukwu na bọtịnụ ngwa ngwa anyị chọta ugbu a.
Ihe niile anyị kwuru bụ ihe ndị a ga - ahụrịrị na Xiaomi Qicycle Euni es808 scooter yabụ anyị doro anya na ụlọ ọrụ ahụ na - arụ nnukwu ọrụ iji meziwanye ngwaahịa ya ma ka oge na - aga, anyị ga - ahụ ụdị M365 nke abụọ na ihe niile a .
Mfe nke mpịachi
Gbanwee n'etiti ọsọ na obodo kwụụrụ
Enweghị mmezi nwere ike ime ka mmiri dị na mpaghara mpịachi
Ihe ngosi na ogwe aka na-efu iji hụ ọsọ na data ndị ọzọ.
Xiaomi M365 skuta
Ọ bara uru Xiaomi skuuta? Kpamkpam. Obi abụọ adịghị m na ọ bụ njem nke ọdịnihu nke nnukwu obodo na ihe akaebe nke a bụ imerime ụlọ ọrụ ndị na-ekwe ka ịgbazite ụgbọ ala ndị a na-agagharị agagharị (VMP) nke DGT tinyekwara anya iji hazie iji ha eme ihe zere ihe mberede, ma ya na ụgbọ ala ndị ọzọ yana ndị ji ụkwụ aga.
Xiaomi's scooter abụghị nke kachasị ukwuu, ọ bụghị ya kachasị ọsọ ma ọ bụghị nke na-enyekarị ikike nnwere onwe, agbanyeghị, ọ bụ ihe kachasị ezi n ’ahịa niile erere ugbu a n'ahịa, yana oke ọnụahịa dị oke elu ma e jiri ya tụnyere asọmpi ahụ. Enwere igwe eletriki eletrik ka mma? Ee, mana ha ji okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ akwụ ụgwọ ahụ, na-ebuwanye ibu ma tụfuo arịrịọ a maka ndị chọrọ skuta igwe eletrik na-adịkarị obere. Na nke a, Xiaomi kwụpụrụ karịa ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị ga - eji ya dị ka ụzọ njem kwa ụbọchị, zụọ gị bụ ihe akwadoro ebe ọ bụ na ị ga-amortize ya na obere oge. Ghaghachi batrị LG 280Wh LG ga-efu gị ego ole na ole na ego ọ gụnyere iji tụnyere njem ọha na eze ma ọ bụ ụgbọ ala ahụ karịrị ihe dị ịrịba ama, yana uru ị ga-enweta ya mgbe niile ma ị nwere ike iburu ya ebe ọ bụla.
Mmezi bụ ihe efu na imirikiti akụrụngwa ndị nwere ike iyi (breeki cable, wiil, ...) enwere ike ịchọta ya na orntanetị ma ọ bụ na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ọ bụla.
Ọtụtụ ekele na ụlọ ọrụ ICON Multimedia maka inye anyị ule nke Xiaomi skuta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Xiaomi M365 skuuta nyochaa